Qaaxadu miyay saamayn kuyeelataa xaqa aad u leedahay magangalyada? - somali
Finland Qaaxo ama cudur kale midna ma saameeyo xaqa aad u leedahay magan galyo in lagu siiyo. Hayadaha hijrada ayaa goaan uga gaara magan galyada si ku salaysan sharciga xaqna uma laha inay helaan xogta caafimaadka codsadeyaasha.
Finland dhammaan dhaqaatiirta, shaqaalaha kale ee caafimaadka ama arimaha bulshada, iyo shaqaalaha iyo turjumaanada xarunta qaabilaada magangalyo doonka waxaa celinaya waajibka qarsoodiga. Taas macnaheedu waa in aan loo ogolayn inay arimahaaga dad kale u sheegaan ayagoon kaa idin dalbin. Taasi waa sababta ay tahay inaadan uga baqin inaad dhibaatooyinkaaga oo dhan u sheegto shaqaalaha daryeelka ku siinaya.
Finland dhammaan baaritaanada, daaweynta iyo daawada Qaaxadu waa lacag la’aan. Adigana qarash lagaama siinayo. Sida dhaqso Qaaxo inay ku hayso loo ogaado ayay u fududaanaysaa in lagaaga daweeyo. Taasina waa sababta ay dantaadu ugu jirto inaad daryeel u raadsato sida ugu dhaqsiyaha badan hadii aad Qaaxo isaga shakido.
Xageed ka heli kartaa caawimaad sharci?
Qof magan galyo doon ahi wuxuu si xor ah u dooran karaa abukaate. Abukaatuhu wuxuu ka codsanayaa lacag in xafiiska caawimaada sharcigu uu siiyo, hadii qofku uusan hanti lahayn.
Xarunta Finland ee Latalinta Qaxootigu waa urur aan dawli ahayn oo cawimaad sharci siiya dadka magangalyo doonka ah iyo qaxootiga inta hannaanka magangalya doonku socdo. Wuxuu la tacaamulaa cabashooyinka kusocda maxkamadaha. Wuxuu sidoo kale cawimaad sharci siiyaa dadka ajnabiga ah ee kale ee jooga Finland.